ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “သူကလေးနဲ့ တွေ့ကြရာတွင်”
နို့ မို့နဖူးလေးသွားပွတ်ရင် ခုချိန်ဆို ကိုပေါနဖူးမှာ ခြံစည်းရိုးက ဒုတ်ခညောင်းနဲ့အရိုက်ခံထားရတဲ့ အမာရွတ်လေး ရှိနေမှာပေါ့…
ကိုပေါပြုသမျှနုနေတယ်ဆိုတော့ မှန်းလိုက်တာ ကြောင်လေးလားလို့ …
ကိုပေါရေ… ဒီမှာ မိုးတွေညိုရင် ကျွန်မက စိတ်ညစ်တယ်… လမ်းတွေပိတ်လွန်းလို့ လေ…
ရွာတဲ့မိုးကလဲ ရုံးဆင်းရုံးတက်ချိန် အချိန်ကိုက်…
အော်.. ဘာလဲပေါ့ ဖတ်နေတာ..မဒမ်ပေါကို အသိပေးရေးတာများလားပေါ့လေ...
Ha ha ha... that's why I was thinking why she never slap you!
Yeh! This few days, keep raining like even dun wanna wake up for work in the morning.....
သူမရဲ့ နဖူးက ချောချောမွေ့မွေ့လေး။
November 13, 2008 at 7:37 PM
I like it too much. love it.
ကွန်ပျူတာ နဲ့ ခံရပြီးကထဲက သတိထားဖတ်နေတာ။ တစ်ချက်တစ်ချက် အမိ ခံလိုက်ရသေးတယ်။
မျက်လုံးရွဲ ကြီး နဲ့ ဖွံ့ ထွားကြီး ဆိုတော့..
မယ်လမင်းပါတယ်.. နွားနီနို့မှုန့်တွေက ... သတိထား...
တတ်လ တတ်နိုင်တဲ့သူ... ဟွန်း...
ကိုယ်ဖေါ်တဲ့ ဖေါ်မြူလာကို ကိုယ်တိုင် စမ်းသုံးလို့ အောင်မြင် အဆင်ပြေမှ သူများကို သုံးခိုင်းပါ...။
e.ပိုက် ပိတ်သွားပြန်ပြီ လို့အင်ဂျင်နီယာ က တင်ပြ လာတာနဲ့ခေါင်း ခြောက် သွားတယ်။eတုံး ကဘဲ ကြီးလေ သလား။ တစ်ရှူးစက္ကူတွေ ကဘဲ ပိတ်လေ သလား။ အကြံ မရတာနဲ့ ရွှန်းမီပြောတဲ့ Heart museum ကလဲ ထောက်ခံထားတဲ့ MR MUSCLE DRAIN DECLOGGER ကို NTUC မှာ မိုးထဲ လေထဲ သွားဝယ်။ တစ်နာရီလောက် ထာြး့ပီး စုပ်ခွက်နဲ့တွနးချ တော့ ရေ ဆင်းသွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှေးသေးတယ်။
စိတ် မချသေးတာနဲ့ byakga အကြံပေးထားတဲ့အတိုင်း ကိုကာကိုလာ တပုလင်းကို ထည့်လိုက်တယ်။ ခဏနေတော့ sprite တဗူးကို ထည့်ပြန် တယ်။ ကိုပေါ ညွန်ကြားတဲ့ အတိုင်း mentos သုံ့းပြား (သူကတော့ တပြားနှစ်ပြားလို့ဘဲ ပြောပါတယ်။ အမှန် က သူက Boyz ကို အကြံပြူတာကို ကိုယ်က လိုသလို အသုံြး့ပူ ) ကို ထည့်လိုက်တယ်။ sprite တွေ ဆူသွားတယ်။ sprite သူံ့းဗူး ထည့်လိုက်တယ်။ ရေနွေးတွေလည်း ကြိူပြီး ငါးဗူးလောက် လောင်းလိုက်တယ် ။ စပရိုက် ၇ ဗူးနဲ့ ကိုကာကို လာ တဗူးပို နေ တာကိုတော့ ကိုယ်ဘဲ သောက်တော့ မယ်။ အခု အိုကေ သွားပါပြီ။ အားလုံး ကို ကျေးဇူးတင် ရှိပါကြောင်း။
November 14, 2008 at 2:10 AM
ခုတော့ ကျမ သိပြီ
November 14, 2008 at 2:27 AM
နဖူးတွေ ပါးတွေ သွားကိုင်ကတည်းက နွားပဲ လို့ ထင်လိုက်ပြီးသားပါ။
ဘယ်ရမလဲ။ သံရုံး ကဗျာမှာ တခါခံပြီးကတည်းက မှတ်သွားပြီ။ :))
November 14, 2008 at 4:36 AM
တန်ခူး….. ဟားဟား ဒီတခါတော့ နပ်သွားပြီပေါ့။ နေဦး။ တန်ခူးအသုံးအနှုန်းထဲမှာ ဒေသအလိုက် ကွဲပြားနေတဲ့ အသုံးတခုကို သွားတွေ့တယ်။ ဒုတ်ခညောင်း ဆိုတာလေ။ ကျနော်တို့ဘက်မှာ ဒုတ်ခနောင်း လို့ ခေါ်တယ်။
ကို(မ)ဇနိ….. ကိုဇနိကို အားကျလို့ အတည်ပေါက်နောက်ကြည့်တာပါ။
မခင်မင်းဇော်…… ဘယ်ဖြစ်မလဲဂျ။ မိုးမီးလောင်သွားမှာပေါ့။
Shin…….ရှင်ရယ်….ကိုပေါရဲ့ ပါးနုနုထွတ်ထွတ်လေးကိုများ ဘယ်ရိုက်ရက်ကြပါ့မလဲ ရှင်ရယ်…။ မနက်စောစောမချင်တာတော့ တူသဗျိုး။
Trh…… သူမရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးကလည်း ဖူးဖူးလေးနဲ့ ရွှန်းစိုနေတယ်။ သွားရည်တွေနဲ့လိမ်းကျံပြီးတော့လေ။
အမည်မသိ….. I like it too much. Love it. ဆိုတော့……ဒို့ရဲ့စာကို မင်းခင်တွယ်တာလား။ ဒို့စာထဲမှာပါတဲ့ နွားမလေးကို မင်းခင်တွယ်တာလား….. ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အဖြေကို ရောနှောမပစ်လိုက်နဲ့…..။ အသေအချာ..ဝေဖန် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဦး…..မသေမချာတွေဝေကာ…ရောရောထွေးထွေးလာမချစ်နဲ့ကွာ…နောက်တော့မှတို့ကိုဆွေးရအောင်….ယာယီလာမချစ်နဲ့ကွယ်….ကြိုတင်သတိပေးထားမယ်။ (ဟေမာနေ၀င်း သီချင်းဖြစ်ပါသည်။) နောက်တာပါ။ လာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ကမောင်ရင်…. ခဲမှန်ဘူးတဲ့ စာသူငယ်လေးလိုပေါ့။ အဟဲ… ကာလသားကြိုက်နည်းနည်းထည့်လိုက်တာလေ။
ကိုဘွိုင်းဇ်…… အဲဒါ ဗမာပြည်က နွားနို့။ ပရိုတိန်း အပြည့်ပါတယ်။ မယ်လမင်းမပါ။
ဖေါ်မြူလာနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ စားသုံးသူလက်ကို ပို့ချင်ဇောကြီးသွားလို့ပါဂျာ။ အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရင် စားသုံးသူကို တောင်းပန်ပါတယ်။
မခင်ဦးမေ….. ကိုဘွိုက်ဇ်ပို့စ်မှာ ကျနော်ရေးခဲ့တဲ့ ပရိုဆီဂျာမှာ နောက်ဆုံးတချက်ကျန်ခဲ့တယ်။ တကယ်လို့ သုံးပြီးလို့ ဘူးထဲမှာ ကိုကာကိုလာလက်ကျန် ကျန်သေးတယ်ဆိုရင် စိတ်ချလက်ချ သောက်သုံးနိုင်ပါကြောင်း။
ရွှေထုပ်လေး…. ကောက်ချက်ဆွဲတာ တယ်တော်ပါလားဟင်။
မမိုးချိုသင်း….. ဟဲဟဲ။ နောက်တော့ ကျနော်အတည်ပေါက်ရေးရင်တောင် လူတွေက သံသယနဲ့ ဖတ်တော့မှာ သေချာတယ်။ ကျားကျားဆိုတော့ မပြေးကြတော့ဘူးပေါ့။
ကွန်ပျူတာ နဲ့ ခံရပြီးကထဲက သတိထားဖတ်နေတာ။
မဒမ်ပေါ မဟုတ်ဘဲနွားမကြီးဖြစ်နေတယ်....ခွိခွိ.. :D
မှားစရာရှားလို့ ကိုရွှေအောင်ရယ်…..ကျနော့်မဒမ်ပေါက အဲသည်ထက် ချောပါတယ်ဗျ…ငှဲငှဲ။
November 14, 2008 at 2:08 PM
November 14, 2008 at 4:19 PM
စင်ဒန်လား….ကျည်းကန်ရှင်ကြီးရေးတဲ့ နွားမေတ္တာစာ ဆိုတာ ဒါမျိုးတော့ ဟုတ်ဘူးထင်ရဲ့။
ဒီတခါတော့ မရတော့ဘူး။ နပ်သွားပြီ။ လူမဟုတ်မှန်း စ ဖတ်ထဲက သိတယ်။ အစက ခွေးထင်တာ။ ဟိ
You do haveagreat sense of humour which would help you to make your lifealot easier especially when you feel down. By the way, I like your recent comment on jealousy at we she me . We ,human at some points in life are jealous of somebody. It's much easier said than done not to have it.To me, I do not want to be jealous of somebody . I would rather like somebody who is jealous of me.Contentment playsabig role to control that kind of feeling. Again, it's not easy.
kom: khin oo may said...Boyz's က live လွှင့်တော့မယ် ဆိုဘဲ။ procedure ကို demonstrate နဲ့တူတယ်။ အမလေး
ဟိုနေ့က ဖတ်ပြီး မှတ်ချက်ပေးဖို့ မေ့သွားလို့ဗျ။
စဖတ်ကတည်းက သိတယ် နွားမလေး ဖြစ်တော့မယ်လို့။
မခံလိုက်ရဘူး။ ဒါပဲ။ ဟဲဟဲ။
မဟန်သူက ဒီပို့စ်ရေးတာ သဘောတူရှာတယ်ဆိုပြီးတွေးတုန်း...
ဗြုန်းဆို ကောင်မလေးမဟုတ်ပဲ နွားမလေးဖြစ်နေတယ်။ ဟဲဟဲ။
Anonymous..... Thanks. I noticed one of my colleagues can take his unfortunate incidents withagreat sense of humor. He is leadingahappier life than me. I am always envious of him.
ဒေါ်ကြီးပန်..... ဒေါ်ကြီးပန်မှ မသိရင် အဘယ်လူ သိနိုင်အံ့နည်း။
ငြိမ်း.... နွားမလေးမို့ မဒမ်ပေါက ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါတယ်..တဲ့။
Eike lay said...
ဟာ ဟား ရယ် တယ်...
“ကျွန်းပိစိမှာဆိုရင် အိုဘားမား အရွေးချယ်မခံရနိုင်”...
မင်္ဂလသုတ် (၇) - Inspiration, Aspiration and the Goal